Sajilo Patro Blogs: सिरानीमा मोबाइल राख्नु हानिकारक
सिरानीमा मोबाइल राख्नु हानिकारक
अचेल मोबाइल फोन यति प्यारो बनेको छ कि सुत्दा पनि सिरानीमा च्याप्ने धेरैजना छन् । फोन र एसएमएससँगै फेसबुक च्याटको लागि ‘मोबाइल पिरती’ बढेको छ । यो ‘पिरती’ गाँस्न युवा पुस्ता अगाडि छन् । तर, यो बानी स्वास्थ्यको लागि हानिकारक रहेको तथ्य वैज्ञानिकहरुले पत्ता लगाएका छन् । अफकम कम्पनीका वैज्ञानिकहरुले गरेको शोधमा ८० प्रतिशत प्रयोगकर्ता सिरानीमा मोबाइल च्याप्ने गर्छन् । बेलायतस्थित द स्लीप स्कूलका शोधकर्ता डा. गोय मिडोज अनुसार सुत्दाखेरि सिरानीमा मोबाइल च्याप्दा हाम्रो मस्तिष्क सक्रिय भइरहन्छ । गहिरो निन्द्रा नपर्दा भोलिपल्टको दिन तनावयुक्त र आलस्य हुने...
माइग्रेनको समस्याबाट जोगिन निम्न विधि अपनाउनुपर्छ :
अहिलेको तनावयुक्त जीवनमा धेरै मानिसलाई टाउको दुख्ने समस्या हुन सक्छ । अचानक टाउकोमा तीव्र पीडा भए वा काममा मन नलागे कतिपयले पेनकिलर खान्छन् । माइग्रेनको पीडामा यस्तो गर्नेहरूले सम्हालिनुपर्छ । सुरुवातमा माइग्रेनको समस्या औषधि खाएर कम हुन्छ यद्यपि यसरी रोकथामको प्रयास गर्नु नोक्सानदायक हुन सक्छ । माइग्रेनको समस्याबाट जोगिन निम्न विधि अपनाउनुपर्छ : –कफी, सफ्ट ड्रिंक्सजस्ता क्याफिन भएका पदार्थ कम प्रयोग गर्ने । –कम खाने तथा समय–समयमा खाइरहने । –माइग्रेनबाट जोगिन पर्याप्त मात्रामा सुत्ने ।
तातोपानीमा मह मिसाएर पिउँदा ताजापन अनुभव हुन्छ । महले वजन नियन्त्रण राख्न पनि सहयोग पुर्‍याउँछ । महमा भिटामिन ए तथा भिटामिन बी हुन्छ जसले छालालाई जवान राख्न सहयोग गर्छ । यसले आँखाको क्षमता पनि बढाउँछ । महमा कोलाजन बन्ने क्षमता हुन्छ जसले अनुहार जवान तथा दागरहित बनाउँछ । जवान तथा स्वस्थ छालाका लागि दिनहुँ एक चम्चा मह खानुपर्छ । मह एन्टिसेप्टिक पनि हो जसले घाउको पनि उपचार गर्छ ।
थकाइ लाग्दा के खाने ?
शरीरमा सामान्यभन्दा कम शक्ति हुनुलाई थकान भनिन्छ । धेरै शारीरिक परिश्रम गर्दा तथा खेल खेल्दा थकाइ लाग्न सक्छ । कहिलेकाहीँ क्षणभरका लागि मात्र थकाइ लाग्न सक्छ भने कहिले लामै समयसम्म त्यसको अनुभूति हुन्छ । थकाइ लागेका बेला भोजनमा ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ । –प्रशस्त फलफूल तथा तरकारी समावेश गरिएको भोजनले शरीरमा शक्ति बढाउँछ । त्यसैले बढी मात्रामा फलफूल, तरकारी एवं सलाद सेवन गर्नुपर्छ । –फलफूलमा आँप, अनार, स्याउ, अंगुर, जुनार, तरकारीमा पालुंगोको साग, गोलभेंडा, कुरिलो, च्याउ, हरिया सागपात तथा आलु खानु उपयोगी हुन्छ । –अंकुरित भोजन, फर्सीको बियाँ, सूर्यमुखीको...
फाइदाजनक अनारको रस
राम्रो स्वास्थ्यका लागि अनारको सेवन सधै फाइदाजनक हुन्छ । प्रत्येक दिन एउटा अनार खाए धेरै रोगबाट टाढा रहन सकिन्छ । एक शोधअनुसार दिनहुँ एक गिलास अनारको रस र तीनवटा खजुर सेवन गरे मुटु रोग लाग्ने खतरा पनि धेरै कम हुन्छ ।